FOMC အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ်၏ အတိုးနှုန်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးပွဲကို ယနေ့ ည မြန်မာစံတော်ချိန် ည တစ်နာရီခွဲတွင် ထုတ်ပြန်သွားဖို့ ရှိပါသည်.
အမေရိကန် ဗဟိုဘဏ်ရဲ့မူဝါဒတွေဟာ အမေရိကန်ဒေါ်လာအပေါ်မှာ အကျိုးသက်ရောက်မှုပြင်းပါတယ်. ယနေ့ ပြုလုပ်မယ့် ဗဟိုဘဏ်ဆွေးနွေးပွဲသည် အမေရိကန် သမ္မတသစ် ဒေါ်နယ်ထရန့် လက်ထက်မှာ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အနေနဲ့ ပြုလုပ်မယ့်ဆွေးနွေးပွဲလဲဖြစ်ပါတယ်. ယခင်နှစ် ဒီဇင်ဘာဆွေးနွေးပွဲတွေအရတော့ ယခု ၂၀၁၇ခုနှစ်မှာ အတိုးနှုန်းတင်မှု၃ ကြိမ်အထိပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်.
သို့ သော်လည်း ဗဟိုဘဏ်အကြီးအကဲ Janet Yellenရဲ့ယခင်ပြောဆိုချက်တွေအရ အတိုးနှုန်းတင်မယ့် အချိန်ကို အတိအကျပြောဖို့ ရာ မဖြစ်နိုင်သေးဘူးလို့ ပြောဆိုထားတာရှိပါတယ်. ထို့ အတွက်ကြောင့် ယခုအချိန်မှာ အတိုးနှုန်းတင်နိုင်ခြေကို မျှော်လင့်လို့ ရဦးမှာ မဟုတ်သေးပေမယ့် အနာဂတ်မှာ ဗဟိုဘဏ်ကလုပ်ဆောင်မယ့် အစီအစဉ်တွေကို အရိပ်အမြွက်အနေနဲ့ ကြားရဖို့ အတွက် traderအများစုက စောင့်ကြည့်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်. အကယ်၍ ဗဟိုဘဏ်အနေနှင့် အတိုးနှုန်းတင်ဖို့ ကို သေချာသလောက်နီးနီးပြောဆိုသွားပါက ဒေါ်လာတက်တာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပြီး , အတိုးနှုန်းတင်ဖို့ ကို မရေမရာပြောဆိုသွားပါက ဒေါ်လာ ကျတာကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်.